Muxuu Farmaajo ka codsaday Madaxweynaha Congo? | KEYDMEDIA ONLINE
Muxuu Farmaajo ka codsaday Madaxweynaha Congo?
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa weydiistay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Diqomraadiga Congo, inuu ka caawiyo sidii uu ula heshiin lahaa Saamileyda Siyaasadda Soomaalya.
KINSHASA, Congo - Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa Madaxweynaha Jamhuuriyadda Diqomraadiga Congo, ka codsaday inuu dhexdhexaadiyo isaga iyo saamileyda siyaasadda Soomaalida.
War ka soo baxay Madaxtooyada Jamhuuriyadda Diqomraadiga Congo, ayaa lagu sheegay in labada Madaxweyne yeesheen wadahadallo socday muddo laba saacadood ah, MW Soomaaliya ayaa ka codsaday MW Félix Tshisekedi, in isagoo ciyaaraya doorkiisa MW Midowga Afrika inuu fududeeyo, wada xaajood dhexmara saamilayda siyaasadda Soomaaliya.
Dhanka kale, Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya, ayaa xaqiijisay jiritaanka codsiga Farmaajo, iyo inuu soo dhaweynayo dadaallo uu Midowga Afrika ku fududeynayo, wadahaddo dhex mara Saamileyda, si loo helo doorashooyin loo dhan yahay, nabdoon oo waqtigooda ku dhaca, Soomaalina hoggaamineyso.
Inkastoo markii hore Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Farmaajo, uu sheegay in isaga iyo dhiggiisa Tshiseked, ka wada hadleen kaalinta Midowga Afrika uu ku leeyahay horumarinta Dimuqraadiyada Afrika, haddana Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa hoosta ka xariiqday codsiga Farmaajo, kadib warka ka soo baxay Madaxtooyada DRC.
Farmaajo wuxuu billaabay olole uu ku doonayo inuu qaar ka mid ah Madaxweynayasha waddamada Africa uga raadsado taageero ku aaddan muddo kordhinta, ka hor inta uusan soo bixin go’aanka ugu danbeeya ee Midowga Africa ka gaaran waqti dheereysigiisa.